Tsoratadidy tena mamorona 20 | Famoronana an-tserasera
Mpankafy famakiana nentim-paharazana ve ianao? Mbola mamaky ny bokinao amin'ny taratasy ve ianao ary mahafinaritra anao koa ny manao azy betsaka? Raha izany dia azo antoka fa ireo mpizarazara ireo dia tena ilaina tokoa ary manintona. Ireo famolavolana ireo dia manolotra hatsarana nefa koa fampiasa mba hahatonga ny traikefan'ilay mpamaky hampanankarena sy ranoka kokoa. Araka ny efa noeritreretinao azy, ny endriny izay misy an'ireo tsoratadidintsika dia samy hafa be, manomboka amin'ny biby, jiro, rantsan-tànana ... ka hatramin'ny kofehy vita amin'ny lamba mahazatra.
Izay zavatra, asa, ilaina na fanao aza dia mety ho tonga fialan-tsiny tonga lafatra hamolavolana singa mamorona sy hamolavolana vahaolana vaovao, mahaliana ary manaitra. antoka Ny famolavolana dia afaka manova ny fahitantsika ny zavatra misy pitsony bitika sy bitika toy ny tsoratadidy.
"Hiverina tsy ho ela aho…"
Silhouette miafina manafina
Tsoratadidy miendrika tanana izay manondro ny tsipika marina nijanonanao
Tsoratadidy miendrika amboahaolo
Mametaka amin'ny endrika tanana
Fanamarihana manaja ny zokin'i George Orwell
Tsoratadidy tany am-boalohany amin'ny endrika fanidiana na zip
Jiro mandeha ity marika ity rehefa maty rehefa mampiasa azy ary tsy mamaky intsony. Tsara ho an'ny mpamaky amin'ny alina.
Tsoratadidy miorina amin'ny ravina zavamaniry.
Mety ho an'ireo tia horohoro. Tsoratadidy miendrika rà.
Modely somary tsotra kokoa, miendrika ribbon.
Fanamarihana miendrika kasety
Ny zavamaniry mamelana eo anelanelan'ny pejy.
Tsoratadidy miendrika kaopy kafe.
Mpisaraka biby mahafinaritra eo anelanelan'ny pejy.
Tsoratadidy manokana ho an'ny asa tsirairay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Tsoratadidy tena mamorona 20
Anx X dia hoy izy:
Mahita Manifesto Kaominista any aho? XD
Valio amin'i Anxo X
Ny endri-tsoratra amin'ny herinandro, endritsoratra amin'ny solosaina